Inta ka dhiman xilli ciyaareedka 2019-20 waxaa Maamulka Premier League ay wax ka bedeleen xeerka bedellada ciyaartoyda, waxaana ay kordhiyeen xiddigaha kursiga keydka soo fariisan doona. Maamulka Premier League waxay xaqiijiyeen in…
Wararka ka imanaya dalka England ayaa shaaca ka qaaday wakhtiga ay maamulka premier League
Ramzi Yare	 May 18, 2020
Wararka ka imanaya dalka England ayaa shaaca ka qaaday wakhtiga ay maamulka premier League doonayaan in ay dhamaystiraan xilli ciyaareedka 2019/2020 kaas oo la joojiyay tan ilaa bishii March sabab la xidhiidha Xanuunka Korona. Dowlada UK…
Weeraryahan ka dheela horyaalka MLS-ka Mareykanka: “Cristiano Ronaldo ayaa ka wanaagsan Lionel…
Weeraryahanka ka ciyaara horyaalka MLS-ka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday midka wanaagsan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, waxaana uu sheegay in CR7 uu ka wanaagsan yahay Messi. Waxa uu dhaliyahan shaaca ka qaaday in Ronaldo uu ka…
Badrudiin Mohamed	 Mar 12, 2020
Tababaraha reer Argentina iyo kooxda Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa isbar-bardhigay Jan Oblak iyo Lionel Messi marka loo fiiriyo dhanka saameynta, kaddib guushii ay xalay kaga gaareen Liverpool garoonka Anfield. Goolhaayaha reer…
Sadio Mane ayaa la arkay asiga oo baxaya cisbitaalka ka dib markii uu maray baaritaan
Badrudiin Mohamed	 Jan 25, 2020
Sadio Mane ayaa ka baxay cisbitaalka ka dib markii uu maray baaritaan si loo ogaado inta uu la egyahay dhaawaca muruqa ka soo gaadhay kulankii Wolves. Markii la weydiiyay jimcihii inuu jiro war dheeraad ah oo ku saabsan taam ahaanshaha…
Manchester United ayaa garoonka Old Trafford ku garaacday Norwich City
Ramzi Yare	 Jan 12, 2020
Manchester United ayaa garoonka Old Trafford ugu garaacday Norwich City Man United ayaa saddexda dhibcood ka tirsatay kooxda martida u ahayd. Marcus Rashford ayaa laba gool kulankan ka dhaliyay si uu u sii wato gool dhalinta waayihiisa…
Kooxda Chelsea Oo Guul Weyn Ka Gaartay Tottenham
Ramzi Yare	 Dec 23, 2019
Chelsea ayaa nasiinada ugu dirtay Tottenham laba gool oo nadiif ah , Biloowgii, labada koox kubad u furan ayay soo bandhigeen balse taasi ma daahin oo Chelsea waxa ay soo bandhigeen kubad aad u qurxoon Chelsea iyaga ayaa kubadda haystay…
Daniel James Oo Ku Miyir Daboolmay Garoonka Dhexdiisa, Ficilkii Layaabka Lahaa Ee Shaqaalaha iyo…
Ramzi Yare	 Oct 14, 2019
Taageerayaasha Kooxda Manchester United ayaa rumaysan karin wixii ku dhacay xidiga xulka qaranka Wales ee Daniel James kaas oo ku dhex suuxay ama miyir daboolmay garoonka isla markaana loo ogolaaday in markii uu soo nafisay dib garoonka…